‘जुन थालमा खायो त्यही थालमा…’ भन्ने स्टाटस लेख्नुभयो ? त्यो लेख्न आवश्यक थियो त ? – Sandesh Munch
‘जुन थालमा खायो त्यही थालमा…’ भन्ने स्टाटस लेख्नुभयो ? त्यो लेख्न आवश्यक थियो त ?
जिन्दगीको सबैभन्दा ठूलो चोट मलाई लागेको छ । जो मान्छेलाई म नेपालको मात्र होइन, संसारकै टप भएको हेर्न चाहन्छु, उसैले यस्तो आरोप लगाउँदा दुःख लाग्दैन होला र ? अझै पनि म उसले किन यस्तो कुरा गर्यो होला भनेर पत्ता लगाउने कोसिस गर्दैछु ।
Prevअन्य वर्षभन्दा यस वर्ष मनसुनको विपत धेरै हुने
Next३८ वर्ष पहिले यही महिनामा ६२ दिनसम्म अस्पताल भर्ना भएका थिए अमिताभ
औषधिव्यवसायीमाथि हातपात गरेपछि औषधिपसलहरु बन्द